पाप धुरीबाट कराउने छ
BhawaniKhatiwada — Sun, 10/08/2017 - 14:25
धन्य छौ पति र पुत्ररत्नहरू धन्य छौ
धन्य छौ सहनशीला पत्नीहरू धन्य छौ
धन्य छौ सासू ससुरा र अभिभावहरू धन्य छौ
दुनियाँ भरमा तिमीहरू नगण्य छौ
समाजमा उच्च वर्गका नागरिकका रुपमा गनिएका छौ
सबैबाट आदर्श नागरिक भनिएका छौ ।
अर्काको दुःख सुन्नु तिम्रो धर्म हैन
तथापि केही प्रश्न गर्न चाहन्छु
केही भन्न चाहन्छु ।
लम्बेतान यात्राका एकाध डोबहरू
bheshraj71 — Sun, 10/08/2017 - 11:59
बिहान मिर्मिरेमा डाँडामाथि नपुग्दैको घाम समात्ने बाल्यकालको इच्छाजस्तै अभिलाषा सङ्गाल्दै निकै उल्लासित मन र हलुका पाइला लिएर उकालिँदै थिएँ म । मेहनत, पसिना, थकाइ र स्फूर्तिका साथ उकालिँदा लाग्यो, जीवनको आनन्द यसमै छ । एउटा भरोसाले रसायो भित्री आँत ।
चारखुट्टे फेदीमै छोडेर आफ्नै खुट्टाका भरमा उचालिँदै गर्दा शिखरसँग दाँजियो मन । संसारका अग्ला शिखरसँग दाँजिन पाउँदा मेरो मनमा पनि अन्नपूर्णा, धवलागिरि, नीलगिरी र माछापुच्छ्रे उभिए । हिमाली उचाइमा रक्तिम आभा चुलियो । त्यो आभाको उज्यालो हृदयमा पनि सञ्चार भयो । हृदय उज्यालिँदा ओठ चल्मलाए– मेरो प्यारो भूगोल, मेरो सुन्दर आँगन, मेरो किशोरावस्थाको क्रीडास्थल । लाग्यो, यही भूगोलको अनुहारमा मेरो खुसी फक्रिरहेछ । क्यामेरामा बचत गर्न खोजेँ खुसी फक्रिएको भूगोलको उज्यालो । अनि फेवाको मोहक स्पर्शले रोमाञ्चित भएँ ।
प्रमोद प्याकुरेल — Sat, 10/07/2017 - 13:54
मञ्जरी आफ्नै कोठा भित्र बसेर पल्ला घरको पिँढीमा रहेकी छिमेकी भाउजूलाई हेरिरहेकी थिई । भाउजू मकैका घोगाबाट केही पत्र खोस्टा नङ्ग्याउदै झुत्ता बनाइरहेकी थिइन् । कोठा भित्र गुम्सिएर मात्र कति सुन्नु ? आमा बस्तुभाउ वा मेला पर्म कता पुगे कि हुन्, थाह पत्तो छैन । बाउको झन कुरै भएन । उनका मन मिल्ने स्कुले साथीहरूका घर पनि अलि परै छन् । मञ्जरीलाई भाउजूसँग गएर एक छिन बसि बियाँलो गर्ने मन त थियो तर आँट थिएन । हुन पनि भाउजू ठेगान भएकी मान्छे पक्कै होइनन् । नाना भाँती कुरा गरेर पटक पटक लाज मर्नु गराइसकेकी छन् । हग्नेलाईभन्दा देख्नेलाई लाज भने जस्तो अनुहार रातो बनाउनु पर्ने चाहिं मञ्जरीले । तैपनि दर्बिलो मुटु बनाएर गई मञ्जरी ।
narayan pokharel — Sat, 10/07/2017 - 02:02
लासका भीडमा पाउछौ तिमी
मेरै लास कात्रोमा
खुला खुला आँखा
आफन्त र परिवारमा
सुवास “दीप” — Fri, 10/06/2017 - 07:56
“बाबु जाउ ड्याडलाई सोध यसपालिको टीकासँग मुख धुने पानी ठिक पार्ने कि नपार्ने?”
उसले टाढैबाट सुन्यो र भन्यो “भो बुढी यसपालिको टीका फेसबुकमा अपलोड गर्ने हो। सबैले देखिहाल्छन, मुख धुने पानी चाहिँदैन।”
फिङ्गल कविता (बालक)
चोट के हो व्याथा के हो
तिम्रो र मेरो मिलन सपना जस्तै भयो
वेदनाले भरिएको प्रेम कहानी....
जुनकिरी बनी आऊ
अगाडि बड्न देऊ !
नगर जातको कुरा (छुवाछुत बिपक्ष गजल)
"मेरो कविता, म होइन"
विद्यार्थीहरू कविता लेख्छन्